प्रचण्ड र माधवलाई सुधार्न सत्ता बाहिरै राख्नु ठीक देखियो – eSajha News
प्रचण्ड र माधवलाई सुधार्न सत्ता बाहिरै राख्नु ठीक देखियो
प्रकाशित मिति: ५ माघ २०७७, सोमबार १३:२६
डबल नेकपाका नेताहरु पदीय झगडामा फसेर आफैहरुले बनाएको पार्टीको बिधान र आफैहरुले ८ बर्ष समय लगाएर र अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको नेपालको संबिधानलाई अवज्ञा गर्दै आ–आफ्ना निजी र पारिवारिक स्वार्थका लगि जनता र देशलाई धोका दिईरहेका छन् संकटमा फसाईरहेका छन् । तीनवर्षसम्म सत्तामा भागबण्डाको बितण्डा बाहेक सत्तासिन भएदेखि राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा चुईंक्क सम्म बोलेनन् । यस पार्टीका शीर्ष नेताहरु राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा किन मुख खोल्न चाहदैनन् ? यो बडो आश्चर्यको विषय भएको छ । ओलीबाट भएका सबै कामहरुको बिरोध गरे पनि भारतसँग गरेका गोप्य सम्झौताहरुको बिरोध भैरहेको छैन ।
अहिले पछिल्लो प्रकरणलाई नै हेर्ने हो भने पनि यो पार्टीका नेताहरुमाथि शंका नगरेर बस्न सकिदैन । केपी ओलीले सत्ताको सम्पूर्ण बागडोर हातमा लिएर अगाडि बढ्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले भारतीय सत्तापक्षलाई रिझाउन सुरु गरेका छन् र भारतको मोदी सरकारले ओलीको कदमलाई समर्थन जनाएको अवस्था छ । यसैक्रममा परराष्ट्रमंत्री प्रदिप ज्ञवालीले भारत भ्रमण गरेका छन् र केही शंकास्पद सम्झौताहरु गरेको आशंका गरिएको छ । तर पनि प्रचण्ड र माधव नेपालले यस बिषयमा मुख खोलेका छैनन् । आखिर किन ?
केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न प्रचण्ड र माधवबाट हरेक किसिमका चलखेलहरु भए । ओलीले पनि आफ्नो सत्ता बचाउन साम ,दाम , दण्ड र भेद सकेसम्मका खेलहरु खेलेका हुन् । सबै खेलहरु काम नलागे पछि र आफू सत्ताच्यूत हुने पक्का भैसकेको संकेत पाएपछि प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर देशलाई नै भड्खालोमा हालिदिएका छन् । सबै राजनीतिक दलहरुलाई सडकमा जान बाध्य बनाएर ओली आफूले भने मनपरी गरिरहेका छन् । ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरिसकेपछि सांसद नै नरहेका आफ्ना गूटका नेताहरुलाई मंत्री पदमा राखेर काम चलाईरहेका छन् र अरु सबै नेताहरुलाई खुईल्याउने काम गरिरहेका छन् । यसैक्रममा आफ्ना परराष्ट्रमंत्री प्रदिप ज्ञवालीलाई भारत भ्रमणमा पठाएर ओलीले भारतको चाहना अनुसार नेपालको स्वाधीनतालाई प्रयोग गर्ने बचनबद्दता दिएको रहश्य पर्दावmास भैसकेको छ ।
ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा भारतलाई समर्थन गर्ने बचनबद्दता आफ्ना परराष्ट्रमंत्री मार्फत जनाएर भारतीय सत्ताको दलाली गरेका छन् । भारतीय सत्तापक्षसँग अरु पनि केही राष्ट्रघाती सम्झौताहरु गरेको आशंका गरिएको छ । तर त्यसतर्फ संसदबादी धारका कुनै पनि दलका नेताहरुले चासो राखेको पाईएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गरेर उक्त कुर्सीमा कब्जा जमाउन लागिपरेका डबल नेकपाका नेताहरु भारतसँग भएका र हुने गरेका राष्ट्रघाती सम्झौताबारे प्रतिकृयाबिहीन हुनुको कारण के हो ? लामो समयसम्म सत्ता बाहिरै बस्नु पर्ने बाध्यता भयो भने मात्र प्रचण्ड र माधवले मालेमाबादका कुरा गर्लान् र राष्ट्रबादका कुरा पनि गर्लान् नत्र यी नेताहरुको कुनै भरोसा छैन !
ओलीले आफ्नो कुर्सी बचाउनका लागि जस्तोसुकै राष्ट्रघाती सम्झौताका लागि पनि तयार हुने वातावरण बिकसित भएको अवस्थाप्रति भने प्रचण्ड र माधव नबोले पनि नेपाली जनता सचेत बन्न जरुरी छ । पुराना राष्ट्रघाती सम्झौताहरुलाई पनि ओलीले निरन्तरता दिएका छन्। कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सन्धि, माथिल्लो कर्णाली सम्झौता , अरुण तेस्रो सम्झौता लगायतका राष्ट्रघाती सम्झौताहरुले निरन्तरता पाउनु पर्ने कारणहरु के छन् ? ओलीले सत्तामा जबर्जस्ती गरेपछि पछिल्लो पटक भएको पञ्चेश्वर परियाजनाबारेको छलफल र त्यहाँ भएका सहमतिहरु पनि नेपाल र नेपाली जनताको हितमा भएका छैनन् । तर प्रचण्ड र माधव नेपालहरु भारतसंगका सम्झौताहरुबारेमा बोल्न चाहेका छैनन् । कारण के हुन सक्छ ? कतै ओलीले भन्दा अलि धेरै नै दिने सवालमा भारतसँग यिनिहरुको बार्गेनिङ त चलिरहेको छैन ? मौनताले आशंका बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
ओलीले भारतको स्वार्थका लागि जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरा एमसीसी प्रकरणमा उन्ले देखाएको भारतभक्तिबाट धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकाले नेपाललाई अनुदानमा गर्ने भनिएको कथित एमसीसीको ट्रान्समिशन लाईन नेपालमा नजोडेर किन गोरखपुरमा लगियो ? नेपालाई नै बिजुली नपुगिरहेको अवस्थामा भारतलाई बेच्ने योजनामा किन लगानी गर्नु आवश्यक देखियो ? काठमाडौंबाट दमौलीतिर ट्रान्समिशनलाई घुमाउनुको वास्तविक कारण के हो ?
पाल्पाको डाँडामा क्षेप्यास्त्र प्रणाली जोडेर मिसाइल हान्ने अमेरिकी योजनामा किन लम्पसार परियो ? ट्रान्समिशन लाइन नेपाललाइ हस्तान्तरण गरेर नेपालले नै अरू देशहरूसंगको ग्रीडमा जोड्ने नीतिमा नगएर किन सिधै इण्डियासंग ग्रीड संझौता गर्नु परेको हो ? एमसीसीले बनाउने भनिएको ४ सय केभी प्रशारण लाईनका लागि नेपालमा दशकौंसम्म बिजुली हुँदैन, त्यसले ईण्डियासंग बिजुली किनेर प्रशारण लाईन चलाउने योजना बनाएको छ । संझौतामा इण्डियाको समर्थन खोजिनु र गोरखपुरमा ग्रीड जोड्ने कुरा गर्नुको कारण के हो ? नेपाललाई हस्तान्तरण नगरेर भारतले स्वतन्त्र ढंगले चलाउने आफ्नै स्वायत्त विद्युत नियामक संस्था बनाउनुको कारण के हो ?
एमसीसीको लाईन किन लगियो दमौली हुँदै बुटवलतिर ? यसको कारण पनि स्पष्ट छ– बुटवलको जीतगढी देखि ३ किलोमिटर उत्तर पाल्पाको नुवाकोटमा उजीरसिं थापाको नेतृत्वको नेपाली फौज अंग्रेजहरुसंग लडेको सामरिक डाँडो छ । सो लडाईंमा १० हजार बेलायती फौजमा ठूलो नोक्सानी पुगेको थियो । त्यो सामरिक डाँडोमा पश्चिमाहरुले पहिल्यै देखि आँखा लगाएका थिए । त्यही डाँडोलाई छोएर जाने गरी ट्रान्समिशन लाईन घुमाएर दमौली पुर्याइएको हो भन्ने कुरा ओलीले जानकारी नपाएका होलान् भन्न सकिदैन । यस्ता सम्बेदनशील बिषयहरुमा आत्मसमर्पण गरिरहेका ओलीले राम जन्मभूमिबारेमा बिबाद उठाएर नाटक देखाउनुको कुनै औचित्य रहन्न ।
त्यसैगरी राजतन्त्रकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले भारतसँग एउटा गम्भीर राष्ट्रघाती सम्झौता गरेका थिए । सो सम्झौता अनुसार भारतले नेपालका कुनै पनि ठाउँमा उस्को चाहना अनुकूलका योजनामा स्वतन्त्रतापूर्वक आपूm खुशी लगानी गर्ने अधिकार दिइएको थियो । यो सम्झौतालाई पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको धेरै समय बितेको छैन । यही सम्झौताका आडमा भारत सरकारले नेपालका कुना काप्चामा आफ्नो स्वार्थका आयोजनाहरु छनोट गरेर लगानी गर्दै आएको छ । यसै मार्पmत भारतले नेपालको राजनीतिमा सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । विकास र सामाजिक सहयोगका नाममा देशका कुना—कुनासम्म आफ्ना गुप्तचरहरूलाई खटाउने काममा भारतीय दूतावासले यही सम्झौतालाई प्रयोग गरिरहेको छ भने एमसीसी मार्फत अमेरिकाले पनि गर्ने यस्तै काम हो ।
नेकपा एमाले र जनयुद्धकालीन माओवादीका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादी समूहबीच एकीकरण भई डबल नेकपा निर्माण भएको र दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त सरकार निर्माण भएको अवस्थामा विगतमा आपैmहरुद्धारा विरोध गरिएको राष्ट्रघाती सम्झौतालाई निरन्तरता दिन कुन हैसियतले दस्तखत गर्न पुगियो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रचण्ड र माधव नेपालहरुले सोध्न आवश्यक किन ठानेनन् ? त्यसैले भन्न सकिन्छ –दालमे कुछ काला है ! केही समय सत्ता बाहिरै रहन दिएर प्रचण्ड र माधवको देशभक्ति र क्रान्तिकारिता परीक्षण गर्न जरुरी छ, आगे सबैलाई चेतना भया !dharananews.com
५ माघ २०७७, सोमबार १३:२६ मा प्रकाशित